fitafiana-malagasy's blog - Ny fitafian'ny malagasy APEAF 2013 - Skyrock.com
Created: 03/10/2013 at 4:05 AM Updated: 16/10/2013 at 3:29 PM
Ny fitafian'ny malagasy APEAF 2013
Ny fitafiana Malagasy
Izahay mpianatra ny Alliance Française Antsahabe, 2nde3, taom-pianarana 2013-2014, dia faly manolotra anareo ity fikarohana momban'ny fitafiana Malagasy ity.
Nous, élèves de l'Alliance Française Antsahabe, 2nde3, année scolaire 2013-2014, sommes heureux de vous présenter notre recherche sur l'habit traditionnel Malagasy.
# Posted on Wednesday, 16 October 2013 at 1:49 PM
Edited on Wednesday, 16 October 2013 at 2:24 PM
Ny Fitafy Malagasy 1
Ny Fitafy Malagasy
Alliance Française d'Antsahabe 2013-2014
Classe de 2nde 3 : Amboara n°01 ; Kevin n°02 ; Guillaume n°07 ; Andrianiaina n° 22; Andraina
II-Ny tantarany (Historique)
a)Ny Fitafin'ny Merina
b)Ny Masonjoany, anisan'ny fitafiana any amin'ny faritra Toliara
d)Ny Fitafin'ny Antakarana
e)Ny fitafiana any amin'ny faritra atsimo
III-Ny fanamboarana azy sy ny antony hanamboarana azy (Comment on le fait, Pourquoi on le fait ?)
IV-Ny mampiavaka azy amin'ny hafa (Différences)
V-Mbola ilaina ve ny fitafiana malagasy amin'izao fotoana izao ? (Utile ou pas ?)
Fitafiana malagasy nentim-paharazana ny lamba ary tsy nisaraka taminy teo amin'ny fiainana manontolo. Na ny zava-boahary manodidina aza nahitan-dRamalagasy lamba avokoa : lambam-bary hoy izy milaza ny akofa, lamban-goaika no ilazany ny zavatra tsy manam-piovana hatramin'ny nahary azy. Lamban'akoho ny zavatra tsy misy fisarahana, lamban'angidina ny zavatra maivana na manify. Ny lazaina hoe lamban-tsoavaly kosa anefa dia ny lamba apetraka eo ambony soavaly hotaingenina.
a)Ny Fitafian'ny Merina
Ny lamba no fitafiana malagasy nentim-paharazana ary tsy nisy nisaraka taminy teo amin'ny fiainana manontolo. Ny lamba fitafy Malagasy dia azo sokajiana anisan'ny zavakanto nentim-paharazana iavahan'ny Malagasy.
Tamin'ny andron'ny Andriananamponimerina dia ny fomba fiankajon'ny vehivavy merina dia ny "tohitena".
Ny lehilahy kosa dia ny "malabary".
Ny lamba dia nifatohan'ny saina sy ny fon'ny Malagasy tokoa satria nisasarany ny fanamboarana azy, ary kolokoloiny fatratra izy io. Ny lamba hono raha vao dia rehareha, raha madio dia voninahitra, raha tonta dia adidy, raha rovitra dia andraikitra.
Misy efatra karazana ny lamba :
- Voalohany : ny LAMBA SARIKA , kely fa tsy mivitrana nefa tsara tenona, lamban'ny tovovavy io ka nahatonga ny hoe : “ Raha tovovavy tsy endrehin-damba sarika , dia tsy adidiko tsy adidin-dreniny”. Tsy adidin'izay mijery ny hiteny aminy hoe : “itafio tsara ny lambanao” ary tsy adidin-dreniny koa satria efa nisahirana nanenona ny lamba izy , fa ny tenan'izay mitafy no tsy misampina azy araka ny tokony ho izy.
- Faharoa : ny TOKAN DELA , lamba tsy mivitrana , an'ny vehivavy lehibe satria asampina eo an-tsoroka fotsiny mandrakotra ny faritra ambony amin'ny tena.
- Fahatelo : ny AMBAKILOHA na KELY ILA, izay lamba mivitrana fa kely sy lehibe , atao hoe AMBAKILOHA, satria lamba lava sy fohy no akambana ka mitohy ny ila loha lamba mba hampitovy ny halavany. Rehefa mitafy azy dia ny ilany mitohy no atao ambony. Misy zaitra roa na telo ny AMBAKILOHA ary atao hoe TOHILOHA koa noho izy notohizina ny ila loha-lamba mba hitovy halavana. Raha itaizana zaza ny lamba tohiloha dia voasintona matetika ka mora mivaha ireo zaitra maromaro amin'ny ila loha-lamba.
- Fahefatra : ny lamba tsara indrindra sady lehibe , dia NY LAMBA MITOVY VITRANA, lamba mihajan'ny lehilahy lehibe. Ny lamba tsara indrindra fitondran'ny vehivavy , haingo eny imasom-bahoaka dia NY LAMBA RONGONY madinika, na NY LANDY nolenoina ho somary mena mazavazava sady mivaha rambo.
- Ny Landy:
Manavanana ny malagasy manokana ny tenona landy. Ny vita avy amin'ny landy dia ireo karazam-damba lafo vidy. Misy ny arindrano, ny telo na efa-bitrana ka mitsoriadriaka ny lambanany afovoany. Ankehitriny dia fitafin'ny vehivavy Malagasy mihanjaika ny lamba landy. Mendrika hanjairana akanjom-behivavy na lehilahy ara-damaody ny landy ary tsy mena-mitahy amin' izay vita avy any ivelany.
Ny landy dia avy amin'ny tranon-dandy, didiana hiala ny soherina ao anatiny dia tanehina miaraka amin'ny lavenona , rehefa masaka dia sasana eny amin'ny rano misy vatolampy hikosehana azy. Rehefa maina ny landy dia lenoina indray ka ahahy ho maina, ary folesina hanjary kofehy madinika.
Ny fomba fitafy ny lamba :
- Sampin-kavanana: izany hoe asampina avy andamosina, ahatona eo an-tsoroka ka avela hikiraviravy , ny tanana havia amin'izany mihazona ny ilany avy eo anoloana.
- Sampin-kavia: Mifampisolo ny tanana, ny tanana havia no manasampina ny lamba hiankavanana. Ny sampin-kavia no hizaran'ny olona tia haingitraingitra.
Lambam-behivavy tsara indrindra ny sora-damba somary mena tanora mazavazava sady mivaha rambo.
Ny lamba eo amin'ny vehivavy
Na misampina havia na miasampina havanana, dia tsy miova ny fitondra ny lamba, raha tsy hoe maty vady. Amin'izay fotoana izay, dia misisika ila ny lamba satria ”maty ila”, hoy ny filaza azy.
Raha tovovavy : manarona soroka ny lamba. Tsy mikiraro izy satria tsy mbola misy ny hividy ho azy, ary ny elony tsy aankina amin'ny soroka fa mbola miankina amin-dray aman-dreny izy. Ny vehivavy efa manambady no mandray kiraro ary ilay lamba teo dia somary ampidinina kely ny soroka raha vao mananika ny efapolo na dimampolo taona izy.
Rehefa miaka-taona kosa indray, dia velarina tanteraka ny lamba, dia midina aty amin'ny antsasa-tànana.
Raha vehivavy miasa, dia misikina hatrany sy misaron-doha. Sikina amin'ny tapany ambony ao an-trano ary amin'ny tapany ambany na sikim-balahana raha eny an-tsaha satria miondrikondrika eny. Ny sikina dia midika tanjaka sy aina.
Ny lamba eo amin'ny lehilahy
Tsy misaraka amin'ny satroka ny lehilahy. Ny lamba koa dia manaraka eny foana.Raha hiasa, dia avalona roa amin'ny halavany ny lamba dia asampina eo amin'ny soroka fotsiny. Mora apetraka ary mora raisinina. ”Mora raisina toy ny lamban'ny mpiasa”.
Ny lehilahy miantsena kosa indray dia tsy mitondra harona. Ilay lamba nasampina amin'ny halavany eo an-tsoroka dia lava kokoa ny ao aoriana. Iny no sarihana mankeo anoloana asiana ny entana na koa asiana vato raha sendra olon-dratsy. Izao fitafy izao no ahitana ny lehilahy miady varotra na miresaka an-dàlana.
Ny Salaka sy ny fomba fitafy lamban'ny tovolahy
Ny SALAKA dia atsofoka eo an'elakela-pe , asiana ambiny lava eo anoloana dia ahodina ny valahana, ny mihodina indray mandeha no atao hoe “tokan'olona”, fa ny mihodina araka izay halavany intelo na in'efatra na mihoatra dia lazaina olona iray, araka ny fihodinany , telo na efatra , fa ny mihodidina impito no lava indrindra, atao hoe “salaka fito olana” , tonga hatrany ambafavo ny eo anoloana , ny lanin'ny halavan-tsalaka iray dia asisika any amin'ny ila valahana , ka natao hoe : “salaka sisik'ila” , dia velarina indray ny habeny , ary ny zorony iray ahodidina ny valahana ka mirebareba toy ny sikina ny salaka , midina hatrany ambany lohalika , mampisasaka ny ranjo.
Manome hery ny salaka , sady haingo ny firebarebany , ka ny olona vonona hiezaka mafy amin'izay ataony , dia natao hoe “manenjan-tsalaka”.
Ny fitafy lamban'ny tovolahy dia miovaova, araka izay tiany sy anton'ny fihetsehany.
Raha mandeha miadana dia atao “SAMBOADY” ahorona amin'ny habeny dia ampandalovina any ambanin'ny ila-helika, ary ampifanindriana eo ambonin'ny ila soroka ny loha lamba roa, ka lamba mihorona no hita eo anoloanasy any an-damosina.
“SIKIN-DAHY” , ahorona amin'ny habeny dia ahodidina ny valahana, rehefa maika na mitondra entana.
“TARI-JORO”: ny ila loha lamba roa no asampina hifanindry eo amin'ny ila soroka , fa ny lamba mirebareba hatreny amin'ny kitrokely mila hitetika amin'ny tany, tarihina ny zorony, fomba fitafy lamba raha mangatsiaka , indrindra ny vao maraina sy ny hariva.
Ny masonjoany moa dia araka ny fahalalantsika dia zavatra ampiasana mba anadio ny tarehy.
Afaka marihana tsara fa marina tokoa izany, fa any amin'ny faritry Toliary, dia afaka tenenina fa anisan'ny fitafiana izy io. Ny vehivavy dia manao masonjoany, satria misy ny masoandro moa dia izy io no miaro ny tarehy amin'ny masoandro. Fitafiana ilay izy satria any amin'ny faritra atsimo dia mitaky tokoa ny masoandro, noho izany dia lasa manao masonjoany ny vehivavy rehetra mba hiaro azy.
Le Masonjoany est comme on le sait, un produit de beauté très utilisé par les malgaches, mais dans la partie sud du pays, il est considéré comme parmi l'habillement traditionnel, car toutes les femmes du sud le met pour pouvoir se protéger du soleil qui est très fort dans les côtes.
Ny mponina avy any amin'ny faritra avaratrin'ny nosy no antsoina hoe Antakarana. Ny anarana hoe Antakarana dia avy amin'ny anarana hoe ankarana izay midika ho vato fotsy iorenan'ny tananan'i Antsiranana.
Ny tavaratra noho izany dia mitafy an'irony lamba antsoina hoe "salova" irony. Mitovitovy amin'ny fitafy silamo izy io. Ny antony dia satria ny mpanjaka Antakarana fahiny (Tsimiaro sy ny zanany Tsialana izay nandimby azy) manodidina ny taona 1840 dia nanaraka ny finoana sy ny fomba silamo.
Ny vehivavy Antakarana noho izany dia miakanjo salova. Lamba roa natambatra izy io ka ny iray itafiana ary ny iray atao na eo amin'ny loha na eo amin'ny soroka.
Hafa kely ny fomba fianjaika any amin'iny faritra avaratrin'ny nosy iny. Raha hamonjy lanonana mantsy ry zareo dia ny olona ao anaty fianakaviana iray na ao anaty fikambanana iray dia mitafy salova mitovy.
Tsy maintsy avy eo amin'ny tratra no isalorana ny salova. Tsy vitan'ny izay ihany fa ny tabaky atao amin'ny tarehy koa aza dia tsy maintsy mitovy. Matetika izy ireny miendrika voninkazo ary dia mahafinaritra tokoa ny mijery azy.
Raha ny volo indray no asiana teny dia tsy maintsy mirandrana ary misy koa ny manao dokodoko na efa mirandrana aza ilay volo. Manaporofo izany ny sary izay hita eo ambany.
Raha ny fitafin'ny lehilahy indray dia tsy dia misy ho lazaina firy fa ny mampiavaka azy fotsiny dia ny fanaovan lambahoany avy eo amin'ny kibo.
Ny ankanjo rehetra dia miloko fotsy, vita amin'ny ladihazo natoraly, na akanjo lava na na lamba afatotra eo amin'ny tratra, izay no anaovan'ny vehivavy dia ny lehilahy moa dia afatotra eo amin'ny soroka, amin'izay dia afaka itondraina zaza, mety resaka ara-bola angambany.
Matetika, ny vehivavy dia tsy manao ankanjo lava fa lambahoany fotsiny. Ny vavy antitra kosa, rehefa mafana ny andro dia ampidinany ilay lamba dia ny nono dia mipotra fotsiny. Any amin'ny Toliara koa moa tsy fotsy ihany ny lokon'ny lamba fa loko tany koa.
Tous les vêtements habituels sont blancs (à l'origine tout au moins), en toile de coton naturel, qu'il s'agisse des robes de femmes, du lamba qu'elles nouent par-dessus sur la poitrine, de celui que les hommes portent sur l'épaule ou dans lequel s'enroulent les enfants. C'est probablement une question de prix. Souvent le matin, les femmes n'ont pas leur robe, elles sont seulement drapées de leur grand lamba, les épaules découvertes. Pour les vieilles femmes, restées fidèles au mode de vie d'autrefois, c'est généralement pour toute la journée et souvent, aux heures chaudes, lorsqu'elles sont assises à tisser une natte, égrener du maïs ou simplement ne rien faire, elles le laissent glisser jusqu'à la taille.
Les vêtements de toile de coton ont depuis longtemps perdu leur couleur originelle pour prendre celle de le Terre. Le manque d'eau peut expliquer la rareté des lessives.
Ny Betsileo dia foko lehibe monina amin'ny tany voafaritry ny ony Mania, avaratra ny tanin'ny Tanala atsinanana, ny tendrombohitr'i Bongolava, andrefana.
Mizara telo ny Betsileo : ny avaratra (renivohitra : Ambositra), ny afovoany (Ambohimalazo, Ambohinamboarina), ary ny any atsimo, izay mitsinjara telo indray : Isandra, Ilalangina ary Iarindrano.
Tànan- dehibe : Fianarantsoa, Ambositra, Ambohimahasoa, Ambalavao.
Ny fiteny moa dia fiteny betsileo, ohatra hoe "akory aby" ny hoe manao ahoana. Ary ny finoana manjaka ao amin'io dia kristianina ka ny katoliaka no tena betsaka.
Na dia mino an'Andriamanitra aza ny Betsileo dia mbola misy ihany ny finoana zava-miafina. Ny betsileo dia tia mamadika
Momba ny fady ihany koa dia ireto misy sombitsombiny :
- ny andro alakamisy dia fady ho an'ny betsileo ny mivoaka handranto, ny manorina trano , ary ny mitoka-trano.
- Izy ireo koa dia fady Trandraka.
- Ny momba ny omby kosa : ny mpiandry omby dia mifady sokina sao mitambokona sahala amin'ny zanak'omby vao teraka,
- Lanin'ny voay ny omby raha kapohina amin'ny ampanga na ambiaty, ary ny mpiandry omby tsy mahazo manakodia vato sao mampikodia ny omby any an-tevenana izany.
Connu aussi sous le nom “Les nombreux invincibles”, les Betsileo occupent le Sud des Hautes Terres malgaches. Les limites sont approximativement, au Nord, la région d'Ambositra, au Sud la barrière naturelle du massif de l'Andringitra, à l'Est la lisière de la forêt et à l'Ouest, les monts de l'Itremo. Les Betsileo sont avant tout, d'excellents riziculteurs.
L'habitat traditionnel Betsileo était autrefois réalisé en fibres végétales pour le peuple et en bois pour les classes nobles. Ces cases étaient bâties sur un soubassement de pierres et certaines portaient des cornes de b½uf à leur faîte. Les volets et le poteau central étaient le plus souvent sculptés de motifs géométriques.
L'art funéraire Betsileo est caractérisé par des tombeaux surmontés de poteaux de bois sculptés, les “Teza” (c½ur de l'arbre) ou poteau de bois quadrangulaire sculpté et pouvant mesurer jusqu'à une vingtaine de mètres de hauteur. Des pierres levées (Vatolahy) sont également présentes dans le paysage funéraire du Betsileo et peuvent être gravé de motifs symboliques.
# Posted on Wednesday, 16 October 2013 at 2:07 PM
Edited on Wednesday, 16 October 2013 at 3:32 PM
Ny Fitafy Malagasy 2
Ny Fomba Fitafiana
Ny fitafiana netim-paharazan'ny Betsileo dia ny lamba sy ny satro-bory. Ny vehivavy dia misikina lamba na manao akanjo tohitena izay tonga eo amin'ny lohaliny ary misalotra lamba matevina. Io lamba io moa dia mety ho lamba vita amin'ny landihazo amin'ny andavan'andro ary lambalandy rehefa misy lanonana.
Ny loko marevaka no tena manavanana ny Betsileo. Ny randra-madinika izay antsoina hoe lafik'akondro no tao -volo mahazatra ny vehivavy betsileo. Betsaka amin'ny izy ireo no manao saron-doha , ary misy ny manao satro-bory : afaka ampiarahana koa anefa izy ireo.
Ny Fitafiana Betsileo
Ny lehilahy kosa dia manao salaka na pataloha fohy. Izany hoe tsy mba mihaotra ny lohalika, ary misalotra lamba toy ny vehivavy ihany . Ny malabary kosa no ankajon'ny lehilahy rehefa handeha hamonjy lanonana. Miaraka amin'ny malabary dia manao lambalandy eo amin'ny soroka.
Ny lehilahy ihany koa dia manao satro-pejy. Ny mampiavaka an'ny Betsileo dai ny satro-bory, sy ny satro-pejy izay satroka vita amin'ny satrana.
Ny mahasamihafa azy roa ireo dia ny satro-pejy misy sofiny ary ny satro-bory dia tsy misy sofiny. Ny malabary moa dia toy ny lobaka lava atreho amin'ny lahalika ary lava tanana. Ny salaka kosa dia lamba kely vita amin'ny landihazo na amin'ny landy, ahodina eo amin'ny kibo ary atao ao anelakelam-pehy.
# Posted on Wednesday, 16 October 2013 at 2:09 PM
Ny Fitafy Malagasy 3
III- Ny fanamboarana azy sy ny antony
Lamba ny tena fitafiana nentim-paharazana malagasy. Miovaova araky ny faritra ahitàna azy ny fomba fitondrana sy famatorana azy. Indraindray izy afatotra ary indraindray dia mizaitra. Misy dikany avokoa ny endrika hitafiana azy.
Na dia efa miova tsikelikely amin'ny fomba fitafy vahiny ary ny malagasy dia mbola manana ny toerany manokana ny lamba eo amin'ny Malagasy ary marika ahafantarana ny Malagasy ny lamba.
Tsy misaraka amin'ny lahy sy ny vavy izy mandritra ny fiainany manontolo ary ny maty kosa dia anokanana ny lamba tsara indrindra.
Ny lambamena dia vita amin'ny landy. Mena ny lokony ary misy soratra maro mapiravaka azy. Fampiakanjoana ny razana izy. Taloha ny lamba tsara indrindra dia vita tamin'ny tranokala izay nalaina avy amin'ny ala.
Manao satroka ny lehilahy Malagasy.
Ny satroka Antadroy dia vita avy amin'ny hoditr'omby izay alaina eo amin'ny trafony. Ny bara koa dia manao satroka izay misy sisiny miorina. Vita amin'ny zava-maniry kosa ny satroka Merina sy ny satroka Betsileo. Samy manana ny fanaovany azy ny faritra tsirairay.
Any Ambanivohitra any dia mbola misy misalaka ny olona. Rehefa andavan'andro dia salaka natao tamin'ny landihazo fotsy no anaovana fa rehefa andro fety kosa dia salaka vita amin'ny landy miravaka vatosoa indray no anaovana.
Lamba vita amin'ny zava maniry
Ny lamba fanao any Atsinanana dia vita amin'ny zavamaniry : tsihy, rofia, na landihazo. Ny sikina dia vita avy amin'ny hodin-kazo.
Tamin'ny taonjato XVII dia nahamarika i Flacourt fa ny lamba miloko mena dia voatokana aho an'ny andriana ary ny lamba manga kosa ny an'ny vahoaka.
Akanjo fanaovana fety eto Imerina ny malabary ary avy any Inde no fiaviany.
Ny vehivavy avy any Atsimo no mpanao lamba vita amin'ny landihazo miloko izay afatony eo ambany helika ary ampiarahana amin'ny soratra maromaro.
# Posted on Wednesday, 16 October 2013 at 3:01 PM
Ny Fitafy Malagasy 4
IV-Ny mampiavaka azy amin'ny hafa
Vitsy ny tany eto ambany masoandro no manana karazampitafiana tena miavaka amin'ny hafa, nefa mbola hafa noho ireo rehetra ireo ny karazampitafiana Malagasy. Ohatran'ny ravin-damba notenomina tamin'ny landy, rongony na kiran'akondro.
Ny lamba dia ny fitafiana malagasy tena mampiavaka ny karazampitafiana malagasy amin'ny fomba fiakanjo any amin'ny firenena hafa.
Pièce principale du costume traditionnel malgache, le lamba (tissu) résume tout un art de vivre. Selon qu'il est en raphia (rofia), en coton (landihazo), ou en soie (lambalandy), il protège de la pluie, du froid, du vent ou du soleil et s'adapte à toutes les circonstances de la vie (travaux, fête, deuil...). Il peut aussi se changer en sac, en couverture, en porte-bébé.
Ny lamba dia mifehy ny fomba fiainana Malagasy. Miaro amin'ny orana, ny hatsiaka, ny rivotra na koa ny masoandro izy ary samihafa ny akora fanamboarana azy arakaraky ny liana azy : rofia, landihazo, landy. Ampiasain'ny Malagasy amin'ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainana ny lamba (asa, fety, fahoriana,...). Mbola azo ampiasaina itondrana entana izy, na atao bodofotsy, na hibabena zaza.
Mazàna, ny lamba dia fotsy ho anaovana isan' andro :
Rehefa andro lehibe dia mitafy lamba landy marevaka ny olona:
Ny lehilahy koa mitafy lamba andavan'andro:
Atao fibabena zaza koa ny lamba naha fitondrana zavatra :
Hafa be ny fomba fitafianan' ny vazaha. Manao palitao izy rehefa mihaingo na andavanandro rehefa miasa :
Misy ihany koa no manao jeans :
Hafa ihany koa fomba mpitafiana ny afrikanina sy ny aborigene d'Australie :
Miloko marevaka ny afrikanina :
# Posted on Wednesday, 16 October 2013 at 3:09 PM